The Oculus Kutsvaga 2 iyo yakagadziridzwa vhezheni yeOculus 'isina waya chaiyo chaiyo headset, asi chii chinoita kuti ive yakasiyana ne the original?
Tenga iyo Oculus Kutsvaga 2
Huye, pane akati wandei ese eesisitimu uye ehunyanzvi shanduko dzinoita kuti iyo Quest 2 ive yakakosha kutariswa. Zvinogona kunge kuri kupenya kwekutenga kune avo vari kutsvaga kupinda muVR kana inogona kusimudzira sarudzo kune varidzi veQuest varipo. Verenga pamusoro kuti uwane pane izvo zvakasiyana.
Oculus Kutsvaga - manyore IPD inotsvedza, nhema machira dhizaini, yerabha musoro
Oculus Kutsvaga 2 - nyowani chena kupedzisa, machira / zvinhu zvakasungwa zvine yakagadziridzwa kuomesa system, flip-up visor, matatu IPD mazinga
Iyo yekutanga Oculus Quest yaive imwe yedu anodikanwa eVR mahedhifoni, ine yakanakisa isina kureruka dhizaini uye zvinoshamisa kuti inokwanisa Hardware ichiiita imwe nzira inoshanda kune anodhura kwazvo PC VR mahedhifoni. Pasina kudiwa kweiyo inowirirana yemitambo PC kana palaptop, yakaita pfungwa zhinji kutenga uye izvozvi zvagadziridzwa paKutsvaga 2.
Quest 2 inomira kunze kwekutanga kuvonga kune yakajeka chena dhizaini maringe neyepakutanga nhema nhema uye grey theme. Iyo inoratidzira zvakawanda kwazvo kupfuura shanduko yemavara zvakadaro.
Iyo Quest 2 ine nyowani yemusoro tambo tambo dhizaini inoita kuti zvive nyore kugadzirisa uye inopa yakagwinya kukwana. Yakagadzirirwawo kuti ive nyore kuwana uye nyore kushandisa zvakare.
Iko iko kwekutanga Kuda kwaive neibhuku IPD inotsvedza, iyo Quest 2 ikozvino ine system iyo inokutendera iwe kufambisa malenzi munzvimbo nhatu dzakasiyana dzakatemwa - 58mm (kuisa 1), 63mm (kuisa 2) uye 68mm (kuisa 3). Oculus anoti dhizaini iyi inoitirwa kuve nyore uye kuti vazhinji vashandisi vanowana imwe yeaya matatu marongedzero akakwana kwavari, kubvisa kunetseka kwekuyera IPD yako uye kugadzirisa iwo matanho nenzira yegranular.
Kutsvaga 2 kwachinja mune dzimwe nzira futi. Iwo gumi muzana akareruka kupfuura iyo Kutsvaga (ingori 10g) uye inoratidzira nyowani uye yakavandudzwa faceplate dhizaini inoita kunge inoregedza mwenje mukati mukati iwe uri kutamba, zvichikonzera mune yakanyanya kunyura chiitiko. Iyo visor zvakare ikozvino yave nekwaniso yekukwiridzwa kumusoro zvishoma kubva munzira kana iwe uchida kutarisa kune nyika yakakukomberedza pasina kubvisa iyo headset kubva.
Ose ari maviri Kutsvaga uye Kutsvaga 2 mutambo mimwe inonakidza yakasanganiswa, yekumashure-yekupfura masipika akavakirwa mutambo uye kuendesa ruzha nzeve dzako nzeve pasina kukakavara kwemamwe waya kubva kumahedhifoni. Iyo Quest 2 inopa nifty positional odhiyo uye ese mahedhifoni zvakare ane maikorofoni ekutora izwi rako rezviitiko zvevazhinji.
Aya maspika anotungamira kune shoma shoma kurira kubuda ropa zvakadaro, saka kana iwe uchida ruzivo rwepachivande ipapo uchave unofara kunzwa kuti pane sarudzo yekushandisa 3.5mm mahedhifoni kana mahedhifoni panzvimbo.
Oculus Kutsvaga - Qualcomm Snapdragon 835, Qualcomm Adreno 540 GPU, 4GB RAM, 64GB / 128GB kuchengetedza kwemukati
Oculus Kutsvaga 2 - Qualcomm Snapdragon TM XR2 Platform, 6GB RAM, 64GB / 256GB yemukati yekuchengetedza
Pamwe padhuze neakasiyana ekushongedza uye ekunyaradza shanduko, iyo Oculus Kutsvaga 2 yakapihwa yekuwedzera musimba uye fungidziro maringe neyekutanga VR headset.
Quest 2 inoshandisa yazvino uye yakakurisa Qualcomm system, iine 50 muzana yakawanda RAM yakagadzirirwa kubatsira simba izvo zvakagadziridzwa zvinoonekwa uye kupa vanogadzira mutambo simba rakawanda rekutamba naro.
Iyo yekupinda-chikamu vhezheni yemusoro wega wega ine 64GB yekuchengetera kwemukati kwemitambo yako, asi ikozvino Oculus yakawedzera zvakanyanya kuchengetedza pamwe neKutya 2 zvakare inowanikwa ine 256GB sarudzo. Mutengo wacho waburukirawo pasi, neiyo yakawanda-yakawanda-vhezheni vhezheni inodhura zvakafanana neiyo diki vhezheni yeiyo yekutanga Chikumbiro.
Simba rekuwedzera muQuest 2 ichavimba tariro yekuvandudza varidzi pavanogadzira mitambo, zvakare ichigonesa vashandisi kuwana mufaro wakanyanya kubva kuOculus Link futi.
Ose maviri Oculus Kutsvaga uye Kutsvaga 2 inopa ruoko-rwekutevera kugona. Iyi yanga iri yesarudzo yekuyedza neKutsvaga kweimwe nguva, asi iri kutumira seyakajairika muKutsvaga 2.
Oculus Chibatanidza yabudawo mubeta uye iri nyore kuwana neKutsvaga 2. Zvinoreva kuti zviri nyore kwazvo kuibatanidza nePC yako uye kutamba mitambo yePC VR kubva kuchitoro cheOculus kana kuburikidza neSteam kana uchida.
Chii chinonzi Oculus Link uye unoishandisa sei kutamba yakatowanda mitambo yeVR?
Iyo Quest 2 inotsigirawo 90Hz zororo reti (uye 120Hz mune dzimwe nguva), pamwe nezvimwe zvinhu zvine hungwaru senge koriori yekutevera zvakare.
Oculus Kutsvaga - OLED inoratidzira ine 72Hz yekuvandudza mwero uye 1600 x 1440 pixels paziso
Oculus Kutsvaga 2 - Kurumidza-chinja LCD pani ine 1832 x 1920 neziso 72Hz pakuvhurwa; 90Hz rutsigiro runouya
Pamwe chete nesimba rakawedzerwa pasi pehood, iyo Oculus Kutsvaga 2 yakagadziridzwawo mudhipatimendi rekuratidzira. Iyo headset ikozvino inopa makumi mashanu muzana muzana pixels kupfuura Quest. Izvo zviri padhuze ne 50K resolution paziso uye zvinouyawo nechipikirwa chekukurumidza kuzorodza mwero, izvo zvinotungamira kune inotsvedza uye inonakidza chiitiko.
Iko Oculus Kutsvaga yakabata 72Hz yekuvandudza mwero, iyo Oculus Kutsvaga 2 zvinoita kunge inokwanisa 120Hz.
Iyo 90Hz yekuvandudza chiyero sarudzo yakasunungurwa chinguva kudzoka uye inoda vanogadzira kuti vavhure iyo yavo mitambo kuitira kuti ishande, asi zvinoreva chivimbiso chezviitiko zvirinani pamwe neakagadziridzwa anoonekwa nekuda kweiyo yakawedzera pixel kuverenga.
Iyo Quest 2 inoenderera ichipa Passthrough + maonero ayo anotendera iwe kuti uone nyika yakakukomberedza uchishandisa emukati-ekunze ekuteedzera makamera uye akangwara muchengeti muganho kutamba nzvimbo system. Izvi zvaive zviripo paKutanga kwekutanga uye zvakangonaka pane chishandiso chitsva, zvichiita kuti zvive nyore kuzvimisikidza pachako kana kuona iyo chaiyo-pasirese pasina kubvisa headset.
Izvi zvakagadzirwa zvakanaka kuti iwe ugone kungobata-bata padivi rehedhifoni kuti umise. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona nekukurumidza uye nenzira yakajeka kunyatsoona iyo nyika yakakukomberedza iwe munguva pfupi pasina kuda kubvisa headset.
Sezvaungatarisira, kana zvasvika pamitambo, iyo Quest 2 inotsigira mitambo yakafanana neiyo yekutanga Chequest, zvichireva kuti ikozvino wave nemitambo inopfuura mazana maviri. Kutenda kuOculus Link iwe unogona zvakare kutamba yakawanda yakawanda PC chaiyo chaiyo mitambo zvakare kana iwe uine chaiyo michina.
Vanodzora uye hupenyu hwebhatiri
Iwo macontroller eQuest 2 akamboita shanduko diki diki. Iyo nyowani dhizaini inofuridzirwa nekusanganiswa kwevatungamiriri vepakutanga uye avo vari pa Oculus Rift S. Iwe unozo cherekedza chimiro chinozivikanwa uye chimiro, asi vatungamiriri veChitatu 2 vane nzvimbo yakati kurei kumusoro uye nenzvimbo yakawanda yechigumwe chako kufamba-famba uye kuwana mabhatani uye chigunwe chekumusoro.
Vatongi vese vari vaviri vanoshandisa bhatiri rimwe chete reAA, asi vatyairi veChipiri 2 vakagadziriswazve nemaresitoreti emukati ekutarisa emukati ekuvandudza hupenyu hwebhatiri. Oculus anoti izvi zvinoreva kuti Quest 2 vatongi vanoshanda zvakapetwa kana zvakapetwa pane vekutanga Vanodzora, vasina kurerutsa kwekutevera kugona.
Iyo Quest 2 zvakare ine mazhinji akangwara manejimendi manejimendi masystem munzvimbo kuti awedzere hupenyu hwebhatiri zvese mune mahedhifoni uye madhimoni. Izvi zvinosanganisira marongero ekutumira iyo Quest 2 kuti irare kana isiri kushandiswa uye nifty system iyo inoshandura otomatiki vatongi kana iwe ukaisa iyo headset uye woitora.
Zvakadaro, seKutsvaga, iyo Kutsvaga 2 inogona chete kubata pakati pemaawa maviri nemaawa matatu ekushandisa isati yada kubhadharisa. Mahedhifoni ese ari maviri anobhadhariswa kuburikidza neUSB-C tambo uye iyo Quest 2 inogona kusvika mubhadharo wakazara mumaawa angangoita 2.5.
Takafunga zvakawanda iyo Oculus Kutsvaga patakatanga kuiongorora uye isu tine zvinhu zvakanaka zvakawanda zvekutaura nezve Oculus Kutsvaga 2 nezvikonzero zvakafanana. Ose mahedhifoni anoshamisa anokwanisa kufunga kuti ivo havadi PC kuti vamhanye, iine inoteedzera yekutevera, yakanakisa visual uye yakakura mutsara-up yemitambo yekutamba futi.
Kutsvaga 2 kune zvimwe zvakanaka zvinowedzera maererano nezvinoonekwa, simba pasi pehood uye dhizaini dhizaini zvakare. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga.
Kana iwe uri mutsva kuVR saka iyo Quest 2 isiri-brainer hazvo. Inodhura kupfuura iyo Quest payakavhura uye inopa inonakidza chiitiko chakazara nekutevera ruoko, isina waya-VR yemitambo, zvinoyevedza zvinoonekwa uye zvimwe zvakawanda kunze. Neazvino software yekugadzirisa zvave kungova nani uye zvirinani.